Apartment For Rent (ID-237) အား တောင်ဥက္ကလာပ တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Apartment For Rent (ID-237)
1200 sqft apartment for rent in South Okkalapa Township. Apartment has attic, hall room, two bed-rooms, kitchen and bath-rooms.
Monthly Rent Price - 20 Lakhs (Nego)
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ၁၂၀၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ငှားရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဟောလ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ ထပ်ခိုး၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တိုက်ခန်း၏လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - သိန်း ၂၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: Apartment For Rent (ID-237)